Ngwaahịa ndị na-emepụta ihe - China Ngwaahịa orylọ ọrụ & Ndị na-ebubata ya
Dropshipping gị n'ụlọnga
Ibu Oké Osimiri
Transportgbọ njem Oké Osimiri
Mbupu ngwa ngwa mba ikuku-ụgbọ mmiri Mbupu - Se ...
Ndị na-ere ahịa ahịa ahịa nke ikuku ikuku - kwupụta ...
100% mbu mbu ibu Euro - 2019 ogo di elu C ...
China N'ogbe China na USA - Express - O ...
OEM ngwaahia ibu na-ebugharị ebubo - FBA ...
Factory N'ogbe mba FedEx awara awara - 201 ...
Mbupu gaa n'ụlọ nkwakọba ihe Amazon FBA na-ahụta mbubata B2B na mba ị na-aga. Want chọrọ ka iziga atọ ndị yiri nkata na Amazon nkwakọba mpụga nke China? May nwere ike inwe nkụda mmụọ, onye nrụpụta ahụ akwadebebeghị ngwongwo FBA, ịkwesịrị ịkọwa ugboro ugboro. Ọzọkwa, mbubata mba dị oke mgbagwoju anya na isi ọwụwa. Ugbu a, anyị bịara inyere gị aka. Anyị na-enye ndị ahịa ọrụ ịnya ụgbọ ala na nnukwu obodo ndị dị na China, ịdebanye aha ngwaahịa, nnabata omenala na destinatio ...
Nkwupụta mba ụwa bụ otu akụkụ kachasị mkpa nke azụmaahịa mba ụwa. Maka ọtụtụ n'ime ndị ahịa eBay / AliExpress / Shopiy na-ere ngwaahịa ha gaa mba ọ bụla. Nnukwu ọrụ dị iche iche nke Guangzhou Ontime na-atụ aro na-enye gị ọtụtụ nhọrọ dị iche iche maka mbufe nke ngwongwo ngwongwo gị. Na mgbakwunye na ibu ikuku na nke oke osimiri, emepụtara njem njem ngwa ngwa iji zaghachi atụmanya gị na mkpa gị ozugbo enwere ike. Ọrụ awara awara na-enye ndị ahịa ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma ...
Fregbọ njem ụgbọelu si China - Cargbọ Ala Kachasị Internationalgbọ Ala nke Mba Karịa Echiche Chetara Mkpakọrịta bụ okwu ejirila eme ihe, mana ọ na-aga ụfọdụ ụzọ ịkọwa ọrụ ndị ahịa anyị lekwasịrị anya. Anyị na-agbasi mbọ ike ime ka mmekọrịta gị karịa ihe ị ga-eme ka ndị ahịa gị gafee ụwa. Frebugharị mbufe mba ofesi na-abụkarị ọrụ nzizi n'etiti oge, ọnụ ahịa na nchegbu gburugburu ebe obibi. Nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere ụlọ ọrụ na-ahọrọ GZ Ontime maka eri irè, ezigbo deli ...
Olee otu nhota na mkpọ ọrụ enyere ndị ahịa aka? Anyị na-enye ọrụ ngwugwu zuru ezu iji mezuo mkpa azụmahịa gị! 99.6% buru oke ọnụego zuru ezu Ejikọtara ya na weebụsaịtị gị yana ire ahịa na akpaghị aka na-achịkwa mmelite Otu ụbọchị ọrụ ndị ọkachamara ejiri Iwu enyere gị Enwere nhọrọ ole na ole dịịrị gị gbasara otu anyị si enweta iwu gị maka nhazi. Nhọrọ kachasị maka ọtụtụ ndị ahịa anyị bụ ikwe ka njikọta API nke ụlọ nkwakọba ihe Mana ...
Zọ na okporo ụzọ ụgbọ oloko SITE CHINA gaa Europe - Ọnụego & Oge ntụgharị | AKW FREEKWỌ AKW |KWỌ | SINO SHIPPING Ọrụ ụgbọ oloko Site na oge iri na isii ruo ụbọchị iri abụọ, ụgbọ okporo ígwè na-ebu ibu karịa ibu mmiri nke na-ewe ụbọchị iri atọ na ise iji rute ọdụ ụgbọ mmiri French nke Le Havre na Fos-Marseille (dịka ọmụmaatụ). UZO UBARA KWES ISR EX KWES THR TH KWES FR SE SEZỌ ỌZỌ, MA KA ỌZỌ KWES THR TH KWES THR A EGO. Nke a mode nke njem a na-ahụ n'ụzọ zuru okè ruru eru ka elu-uru ulo oru ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka ugbo ala, electronic ...
Nye ụlọ nkwakọba ihe na-arụ ọrụ nke ọma, nchekwa na n'efu na China Anyị nwere ụlọ nkwakọba ihe 3000 + nke dị na Guangzhou er Na-enye n'efu maka ọnwa atọ maka ndị ahịa ọhụrụ, yana n'efu mgbe 3months dabere na ị nwere ma ọ dịkarịa ala 60Pcs iwu mbupu kwa ọnwa house 3000m² nkwakọba nwere ike izute gị na-eto eto atọ ndị yiri nkata mkpa ， ngwa ngwa hazie gị iji na-akwadebe maka Mbupu. Anyị nkwakọba na-gị na ngwaahịa mma ， zuru ezu na 24/7 nche onyunyo na mkpuchi. Step1 ： Nkwakọba Renata Produc ...
Nyefee FedEx Ọrụ Site na China gaa Fed Ex Ship DHL International Shipping Rates Philippines
Ngwongwo na-agba ọsọ nke ọma, ndị ọkachamara na-ahụ maka ego na ndị ọrụ ahịa ahịa ka mma; Anyi bukwa ndi otu ezin’ulo ndi di n’otu, ndi obula n’abia na ulo oru bara uru “idi n’otu, mkpebi siri ike, ndidi” maka onye na-ebugharị FedEx Service Site na China rue Fed Ex Ship DHL International Shipping Rates Philippines, Anyị ga eme nnukwu mbọ ga-enyere ụlọ na mba ofesi aka. ndị na-achọ ịzụrụ ahịa, ma mepụta otu uru na mmeri-mmeri mmekọrịta n'etiti anyị. anyị ji ịnụ ọkụ n'obi waitin ...
Mostzọ kachasị ọnụ ahịa iji napụta nnukwu ọnụọgụ. Site na iji mmekọrịta anyị siri ike na ogologo oge, mmekọrịta anyị, GZ Ontime na-enye gị azịza nke ụgbọ mmiri na-agbanwe agbanwe, nke a pụrụ ịtụkwasị obi ma nwee ntụkwasị obi. Ndị ahịa ji amamịghe anyị mara na ibufe ụgbọ mmiri mba ụwa gafere na ntanetị zuru ụwa ọnụ nke gbasara mba na mpaghara iri anọ na isii. Ha ji ikike ijikọ yana ọrụ ndị ọzọ dị ka mbugharị ụgbọelu, njem ọtụtụ igwe, ọrụ gafere ókèala, ma ọ bụ ịre ahịa ụlọ ahịa. Mor ...
Onye na-enye aka na mbuga ụgbọ mmiri Uru nke nnyefe Maka ndị ọchụnta ego na-achọsi ike, Dropshipping bụ ezigbo azụmaahịa azụmaahịa n'ihi na ọ dị mfe ịnweta. Na mbufe mbufe, inwere ike nwalee echiche di iche-iche di iche-iche n’ebughi oke agha, nke n’enye gi ohere imuta otutu ihe banyere otu esi ahota na ire ahia. E nwere ihe ndị ọzọ mere na izipụ ndị mmadụ ozugbo bụ ihe ewu ewu. 1. Obere ego achọrọ Ikekwe uru kasịnụ nke ire ere bụ na ị nwere ike mepee ụlọ ahịa e-commerce w ...
Ọrụ ndị agbakwunyere bara uru Jiri ọrụ bara uru bara uru iji wuo akara aka gị! Nkwalite ụdị 1. Biko tinye ntinye ahịa ma debe ndị ahịa gị. 2. Repackage ngwaahịa na ahaziri nkwakọ igbe na ọkacha mmasị gị ịke. 3. Ntinye na mgbakọ nwere ike imeziwanye usoro ọkọnọ gị ma mee ka usoro nkesa dị mfe. 4. elingdebanye aha bụ usoro na-eweta nsogbu mana ọ dị mkpa, yabụ anyị ga-eweghara ya maka gị ma debe aha mmado nke ọma iji hụ na a na-ahụ ngwaahịa gị. Tụkwasịnụ Cha ...
Ngwọta Mbupu Postal Anyị ghọtara n'ezie azịza nzipu ozi bụ mgbe niile nhọrọ maka azụmaahịa e-azụmahịa ka ọ na-enwe ọnụego dị ala. Iji mejuo ọchịchọ ndị ahịa dị iche iche, anyị na-arụ ọrụ na nzi ozi nzi ozi na afọ ndị na-agafe ma na-ewepụ ọrụ ọjọọ site n'oge ruo n'oge. Ugbu a, ndị ọzọ kachasị mma. China Post China Post ekewa elu ngwugwu na edebanyere ngwugwu. Ọ bụ ọrụ ngwugwu mba ụwa maka ngwugwu ndị na-erughị 2KG. China Post na ...
DHL FedEX UPS gosipụtara ọrụ ụgbọ mmiri mba si China gaa USA
Nke a bụ GZ Ontime Logistics, anyị bụ ndị ọrụ mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ na nke ndị ọrụ mgbasa ozi mba na-akwado.
Ọfịs anyị n'ozuzu dị na Guangzhou, GZ Ontime Aims na-enye ndị mbụ na klas ọrụ anyị kpọrọ ihe ahịa n'ụwa. Ọrụ anyị na-ekpuchi na AMAZON FBA SHIPPING, ibu mmiri, ibu ikuku, nkwakọba, nkwupụta omenala, njem ụgbọ ala, ahịa, mbupụ & mbubata. Kpọtụrụ anyị taa! Anyị enyi na enyi otu egwuregwu nwere ike ijikwa gị niile mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Adreesị: Guangzhou Ontime
Ndị na-ere sayensị na-atụle uru F ...
Railgbọ okporo ígwè ọhụrụ gaa Europe
Ndị FedEx gbagburu egbe na-anata fundi ...
Ihe ngwugwu ngwugwu
Biko tinye nọmba ngwugwu gị